PSJTV | इटालीमा १ डरलमै घर!
१ डलर अर्थात् १ सय १३ रुपैयाँमा के आउला? नेपालमा सानो परिवारका लागि चारकोठे पक्की घर बनाउन ३० लाख रुपैयाँको हाराहारीमा खर्च लाग्छ। तर इटालीका दुई गाउँमा १ डलरमै घर बिक्री गर्न थालिएको छ।
दुई इटालियन गन्तव्यले सुमदायको संख्यामा आएको गिरावटका कारण नयाँ बासिन्दालाई लोभ्याउन १ डलरभन्दा थोरै बढीमा घरको मूल्य तय गरेको छ। यो खबर आजको कारोबार दैनिकमा छापिएको छ।
यसका लागि क्रेताको ध्यानाकर्षण गर्न वेबसाइटसमेत लन्च गरिएको छ।
धुम्बाराहीकी क्षेत्रमाया गुरुङ बाटोमा हिँड्दै थिइन्। गलामा लगाएको सिक्री कसैले झ्वाट्ट तानेर लग्यो। ‘चोर चोर’ भन्दा भन्दै सिक्री लुटेर भागे। गत सोमबार साँझ पल्सर मोटरसाइकलमा आएका दुई जनाले भीडभाड भएको मौका ...